Masiibo & imtixaan rabbaaniya oo cid walba ku iman karta ..
Qiso naxdin leh oo ku dhacday 6 qof oo walaalo ah ayaa maalmahanba aad looga hadal hayey magaalada Hargeysa, waxaana lagu soo baraarugay oo dadka badankoodu ogaadeen kaddib markii Sh. Maxamed Aadam uu Jimcihii ka sheegay masjidka Cali Mataan ee badhtamaha magaalada Hargeysa.
Ubadku waxay isugu jiraan Rag iyo Dumar ay da'doodu u dhaxayso 35 ilaa 12 Jir, Labo ka mid ahi waa Rag inta kalena waa dumar. Lixdooda ruuxba waxaa asiibay xanuun fajaciso iyo anfariir ku riday qof kastoo la kulma ama looga sheekeeyo.
Adhaxda (Dhabarka) ayey Lix-dooduba ka jabeen markii ay marayeen da'da u dhaxaysa qaan-gaadhka ilaa 18 Jirka. Waxaanay dhammaantood noqdeen Curyaamiin aan suuliga gaadhi karin. Inantii ugu yaraydna waxay dhawaan u dhimatay xanuunkan.
Waa imtixaan rabbaaniya oo innaga la innagu eegayo, waxana qof waliba uu imtixaankaasi kaga bixi karaa isagoo si mug leh u sawirta nolosha caynkaa ah, Fiiriyana kaalinta uu ka qaadan karo. Sidaasi daraaddeed qoyskan dhibaatada ba'an ee caafimaad haysato ee waliba ay ugu biirtay Saboolnimadu, kuna jira Guriga Kirada ah, Maxaad ilaahay hortii aad ugu tari lahayd ?